China Aerosol Vuvu mveliso kunye nabenzi | Kangyuan
• Yenziwe nge-PVC yonyango engenatyhefu, ngaphaya kwaye ethambile.
• Vumelanisa nayiphi na indlela yokuma yesigulana, ngakumbi ekusebenzeni kwedecubitus.
• I-6ml okanye i-20ml ye-atomizer jar inokuqwalaselwa.
• Uyilo olukhethekileyo lwe-lumen ye-catheter luqinisekisa ukuba kungena umoya, i-evencatheter isongwe. I-twistor icinezelwe.
Ukupakisha: 100sets / ibhokisi
Ubungakanani beCarton: 52x42x35 cm
Le mveliso ineoksijini okanye umoya oxineneyo njengomthombo wamandla kunyango lwe-inhalation yomoya.
I-XL, L, M, S
Isigqumathelo se-anesthesia senziwe ngekhafu, isikhonkwane somoya sokunyuka kwamaxabiso, ivelufa yokunyuka kwamaxabiso kunye nesakhelo sokubekwa, kunye ne-inflatable ye-mask ye-anesthesia mask yenziwe ngezinto zonyango lwe-polyvinyl chloride. Inani eliyintsalela kufuneka libe ngaphantsi kunokusetyenziswa kwenzalo ye-EO.
Ulwakhiwo lwemveliso kubandakanya eyakhiwe ngeribhoni, i-aluminium kunye nemaski yokujongana, iityhubhu zeoksijini kunye nokufakwa, okusetyenziswa njengamathini eerosol, ukuthelekisa ukuphefumla ngomlomo. Le mveliso kufuneka ibe yinyumba. Ukuba ukusetyenziswa kwe-ethylene oxide sterilization, intsalela ye-ethylene oxide ayikho ngaphezulu kwe-10μg / g
Le mveliso isetyenziswa ngoogqirha ngokweemfuno zomsebenzi zonyango. Indlela yokusebenza ekhethekileyo:
1. Vula iphakheji, ukhuphe iatomizer.
2. Isinxibelelanisi sokufaka ioksijini sifakwa kwiatomizer ngokudityaniswa kwekona yangaphandle ngokudibanisa ioksijini, qinisekisa uqhagamshelo oluqinileyo.
3. Ukhulule isiciko setanki elenza i-atomizing, iyeza likagqirha ligalelwa etankini emva kokwenza i-atomization, qinisa isiciko, emva koko imaski (okanye ukuluma) iplagi yokudibanisa kwi-Atomization pot.
4. Iqhosha lemaski kwizigulana ezimpumlweni, ezinje ngokusetyenziswa kohlobo lokuluma iatomizer, indawo yokuluma ifakwe emlonyeni wesigulana.
5. Vula umthombo wegesi, kwaye uqhubeke nokunyanga i-atomization inhalation.
1. Izigulana ezine-hemoptysis enkulu okanye isithintelo somoya.
2. Ngenxa yenkqubo yesifo ayinakunyamezelwa ngabakhubazekileyo.
[Iziphumo ezingalunganga] akanayo
1. Nceda uyijonge ngaphambi kokuyisebenzisa, ukuba unayo le miqathango ilandelayo, musa ukuyisebenzisa:
b) Ukupakishwa konakele okanye yinto yangaphandle.
2. Le mveliso kufuneka iqhutywe ngabasebenzi bezonyango kwaye ilahle emva kokusetyenziswa okunye.
3. Ngexesha lokusebenzisa, le nkqubo mayibe kumsebenzi wokubeka esweni ugcino olukhuselekileyo. Ukuba kwenzeka ingozi, kufuneka uyeke ukusebenzisa kwangoko, kwaye abasebenzi bezonyango kufuneka baphathe ngokufanelekileyo.
4. Le mveliso yintsholongwane ye-EO kwaye ixesha elifanelekileyo liyiminyaka emibini.
Isigqubuthelo sobuso se-anesthesia esipakishiweyo kufuneka sigcinwe kwindawo ecocekileyo, ukufuma kwesihlobo akukho ngaphezulu kwe-80%, iqondo lobushushu akufuneki libe ngaphezulu kwe-40 ℃, ngaphandle kwegesi etshabalalisayo kunye nokungena komoya okuhle.
Egqithileyo Oxygen Vuvu
Okulandelayo: Alahlwayo Ukuphefumla Icebo lokucoca ulwelo
I-PVC yeLaryngeal Mask yomoya